နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: သမီးလေးရဲ့ တိုးတက်မှု ၃
သမီးလေးတောင် ဘာလိုလိုနဲ့ ၅လပြည့်ပီး သိပ်မကြာခင် ၆လပြည့်ပါတော့မယ်။
သမီးလေးက မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့တယ်ဆိုရင် ယုံကြမလားပဲ...
သမီးလေး ၂လခွဲထဲက ခေါင်းထောင်ပီး ၃လနဲ့မှောက် ၄လနဲ့ထိုင်ထ ကို မအေကထိန်းပေးရပါတယ်။ သမီး ၅လပြည့်ပီးချိန်မှာ ဘေဘီဝေ့ါကာထဲမှာ ပျော်နေပါပီ။ ၄လပြည့်ပီးစလောက်မှာ မအေက သူ့ဂျိုင်းအောက်ကနေကိုင်ပီး မတ်တပ်ရပ်ဆော့တာကို ကူနေတာ..သူက မအေကို တရုပ်သူရဲများလို ခြေ၂ချောင်းခုန်ဆွခုန်ဆွလုပ်ပီး ခေါ်သွားတာ..ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ အရုပ်တွေထည့်ထားတဲ့ဗုံးဆီရယ်ပါ။ အံ့လဲအံ့သြ...ပါရဲ့။ ငယ်၂နဲ့လမ်းလျှောက်ချင် မတ်တပ်ရပ်ချင်တော့ ပုံမမြင်ရတဲ့သူတွေက မယုံကြ။ တနေ့တော့ ပုံရိုက်ပီး တင်လိုက်တော့မှ တကယ်ပါလားဆိုတာ သိကြတဲ့အဖြစ်။ သမီးလေး..သိပ်ဆော့ပါတယ်။ စကားတွေလဲ ပြောပါတယ်။ အသံတွေလည်းထွက်ပါတယ်။ မအေ သီချင်းဆိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ သူ့ကို အသံစုံ လုပ်ပြရင် သဘောတကျနဲ့ရီလေ့ရှိပါတယ်။
၃လသမီးလောက်တည်းက မအေက သူ့ပါးကိုနမ်းရင် သဘောတကျ ပြုံးတတ်တဲ့သမီးဟာ ၄လပြည့်ပီးနောက်ပိုင်းမှာ မအေ နမ်းတာနဲ့ အသံထွက်ရီတတ်လာပါတယ်။
၃လခွဲလောက်မှာ လူတတ်ကြီးလုပ်ပီး နို့ဗူးကိုလက်၂ဖက်နဲ့ကိုင်ပီးသောက်ပါတယ်။ ရီလည်းရီရတယ်။ သေချာမကိုင်တတ်တော့ ပါးစပ်ကနေချော်ထွက်တာပေါ့။ ပြင်ပေးလည်းမကြိုက်ချင်ဘူး။
မအေ ကိုင်တဲ့ဟာ မှန်သမျှ အကုန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မအေ ဘာလုပ်လုပ် အကုန်ပါချင်ပါတယ်။ အခုများဆို မအေကို အပျောက်ကိုမခံပါဘူး။ အချွဲပိုလာပါတယ်။ မငိုပဲ အော်တတ်လာတယ်။ မအေက မကြည့်ရင် အော်တာတိတ်ပီးကြည့်ရင် ဆက်အော်ပါတယ်။ လိုချင်တာ လုပ်ချင်တာဆိုလည်း အင့်အင့်နဲ့ တောင်းဆိုတတ်လာပါတယ်။ မအေခမျာ..အခုတော့ အိမ်သာသွားလည်းမဖြောင့် ရေချိုးလည်းမဖြောင့်ပါဘူး။ ခုတော့..အိမ်သာသွားလည်းတူတူပေါ့။
အခုဆို သမီးကိုရေချိုးရင် မအေပါစိုလို့ သားအမိတွေ heater ဖွင့်ပီးတူတူချိုးရပါတယ်။ သမီးက ရေကိုတအားဆော့တတ်နေပီ။ ထိုင်လို့လည်းရတော့ လက်တွေနဲ့တအားဆော့ ခြေတွေနဲ့ကန်ပေါ့။ မအေဟင်းချက်လည်းပါချင်ပါတယ်။ ဟိုဟာကိုင်ဒီဟာကိုင်လုပ်ချင်တာ။ မအေခမျာ ဘာလုပ်လုပ် မလွပ်လပ်ကြီးနဲ့ပေါ့။
သမီးလေးက မအေလက်ထဲကနေ သူသွားချင်တဲ့နေရာကို သွားပီး မျက်စိရှေ့ရှိသမျှဟာတွေ ဆွဲချပါတယ်။ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်က အသံထွက်တာတွေ သဘောကျတော့ အဲ့ဒါကိုလည်းဆော့ပါတယ်။ ဘောလုံးအရောင်စုံဆိုလည်းအလွတ်မပေးပါဘူး။ ရေသန့်ဘူးဆိုလည်း
ဆော့ရတာကြိုက်လေရဲ့။ သူ့ကစားစရာ အရုပ်တွေဆိုလည်း မလွတ်ရဘူး။ သီချင်းဆိုလည်းကြိုက် တီဗွီဆိုလည်း မလွတ်တမ်းကြည့်လို့ နောက်ဆုံးမေမေက မကြည့်ပဲ ပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိပါပဲ.။ တီဗွီက လာတဲ့ ကြော်ငြာဆိုလည်းကြိုက်လို့..ကိုယ့်မှာ ကျိတ်ရီရသေးတယ်။ အသံထွက်တဲ့ဟာ လက်နဲ့နှိပ်တာကို ဆရာမက ခြေထောက်နဲ့ကန်လိုကန်ရဲ့ တခါတလေကျတော့လည်း မအေကို ကိုင်ခိုင်ပီးသူက အပေါ်က ခုန်လေရဲ့။ သူထိုင်ပီး တခါတခါအိပ်လေ့ရှိတဲ့ ပုခက်ထဲကနေလည်း ကုန်းကုန်းထတဲ့အပြင် အောက်ကပစ္စည်းတွေကို ကုန်းပီးကိုင်လို့ မေမေ့မှာ ပြုတ်ကျမှာတောင် စိုးရိမ်နေရပီ။
ညညဆိုလည်း တော်တော်နဲ့မအိပ်လို့ ဆူရသေးတယ်။ သူ့ကိုဆူရင် ကိုယ်ရီချင်တာကို အောင့်ထားရတယ်။
ဘာလို့ဆို သူ့မျက်လုံးပြူးပီး မအေကိုလှန်လှန်ကြည့်တာ။ မအေက မပြုံးမချင်း လှန်ကြည့်နေတာ။ တခါတလေတော့ သနားလို့ ပြုံးပြလိုက်ရင် ကျေနပ်ပီး မအိပ်တော့ပြန်ရော.. အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ကို ဆူပီးတာနဲ့ သူမျက်လုံးပြူးကြည့်ပီဆိုတာနဲ့ နို့တိုက်ပီး ခေါင်းလေးကိုသတ်ပေးမှ ငြိမ်တယ်။ နို့မိုဆို သွေးတိုးက
အခုဆို သူ့ဖေဖေကို မြင်တာနဲ့... မေမေ့ကိုယ့်ပေါ်ကနေ ထွန့်ထွန့်ကိုလူးနေတာပဲ ။။ အဖေကိုကြည့်လိုက် အသံထွက်လိုက် မအေပေါ်မှာ ဂဏှာကိုမငြိမ်ဘူး။ ဟော...သူ့ဖေဖေလဲခေါ်ရော မအေပေါ်ကမခွါချင်ဘူး။ ငိုရော။ အဲသည်လို.. ။ကိုယ်က ဒါကြောင့်သူ့ကို ညိုမြလို့ခေါ်တယ်။ သမီးမှာ ကိုယ်ခေါ်ဘူးတဲ့နာမည်တွေ အများကြီးပဲလေ..။သူမွေးစတုန်းကပေါ့...။ နို့စိုရင် အငန်းမရစို့လွန်းလို့ အငန်းမရဒေ၀ီ လို့။ ငိုရင်လဲ အသံပြဲလွန်းလို့ ပြဲလန်စိန်လို့ ဆော့လွန်းတဲ့အခါ ဆူးဆလပ် ဒေ၀ီတို့ပေါ့။
သမီးလေးက သတ္တိဂဲ။ ဆေးထိုးရင် သူများကလေးတွေလို ငိုကြောမရှည်ဘူး။ ၁မိနစ်ဆိုအိုကေပဲ။ ခုချိန်ထိတော့ သမီးလေးက ဖျားတာ သိပ်မရှိသေးဘူး။ ဟိုးတလောက ဆေးထိုးပီး တခါဖျားတာပဲရှိသေးတယ်။ သမီးလေးက သူများကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်သိပ်မထွားဘူး။ မွေးစက ထွားပေမဲ့ သူက ပုံမှန်ပဲထွားတယ်။ နို့မှသိပ်မစို့တာကိုး။ မအေနို့ပဲစို့တာများတယ်။ အရမ်းဆော့လို့ သိပ်မဖွံ့ဘူးထင်တယ်။ အစားကျွေးရင်တော့ ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူး။
သမီးရဲ့အပြုံးက မေမေ့ကို ကိုင်လှုပ်သလို ဖေဖေ့ကို အမောပြေစေတဲ့ ဖေဖေ မေမေရဲ့အားဆေးပေါ့..သမီးလေးရေ..။ သမီးလေးကို နမ်းရရင် ..မေမေ့အမောတွေ အားလုံးပြေတယ်..သဲတုံလေးရေ..
အခုဆို သမီးလေး ၆လပြည့်တဲ့နေ့ကျရင် သမီးကို ပထမဆုံးအစာကျွေးရတော့မှာမို့ ဖေဖေရော မေမေရော စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေတယ်..သဲလေးရေ..။ ပထမဆုံး စ စားရမဲ့သမီးလေးအတွက် ပန်းကန်တွေ ခွက်တွေနဲ့ မေမေထိုင်ခုံလေးတွေ ပြင်ပေးနေတယ်။ သမီးလေး အစားကျွေးဖို့ မေမေ မြို့နယ်ကလုပ်တဲ့သင်တန်းလဲ တက်ပီးသွားပီ...။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့..မေမေပိုအလုပ်ရှုပ်ပီပေါ့..ကွယ်။
သမီးရယ်.. အိပ်ပါတော့အိပ်ပါတော့ပြောတာကို မအိပ်ပဲနဲ့ ပြုံးပြုံးပြနေတဲ့ ရှူမငြီးတဲ့ ချစ်သမီးလေး
Posted by နောင်ဂျိန် at 8:51 PM
khaing February 4, 2014 at 1:55 PM
Khine Mye Thu February 6, 2014 at 11:05 PM
သမီးလေးကို အိမ်နာမည်ကောင်းကောင်းလေးတွေပေးပါမေမေ. ပြောသာပြောတယ် အမလဲ သားကိုခေါ်တဲ့နာမည်က အပုကျုတဲ့. သမီးလေးက တိုးတက်နှုန်းတွေမြန်လိုက်တာနော်. သိလဲအတော်သိတယ်
လသာည February 6, 2014 at 11:05 PM
မေမေက နာမည်ပေးအလွန်ကောင်းတာပဲ... :D
ခ်ျစ်စရာ သမီး ဝတုတ်ကစ်